Izinto ezibalulekile eziyi-10 Zokukhiqiza Okuqukethwe Okusebenzayo | Martech Zone
NgeSonto, Okthoba 18, 2015 Lwesibili, Disemba 15, 2020 Douglas Karr
Qhwa iyipulatifomu yokubambisana esetshenziselwa ukwenza lula ukukhiqizwa kokuqukethwe ngaphakathi kwenhlangano yakho. Babhekisa kulokhu njengenjini yokuqukethwe futhi bachaza izinto eziyishumi - zombili ezivela enhlanganweni nasepulatifomu - ezenza ukukhiqizwa kokuqukethwe kuphumelele kakhudlwana.
Yini Injini Yokuqukethwe?
Injini yokuqukethwe ngabantu, izinqubo, namathuluzi aletha okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu, okubhekiswe futhi okungaguquki ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemidiya, kufaka phakathi okuqukethwe kwebhulogi, ama-webinars, ama-ebook, ama-infographics, amavidiyo namaslayidi.
Ukuthengwa Okuphezulu - Ngoba ucwaningo, ukuthuthukiswa, ukuklanywa, kanye nokwenziwa kohlelo lokumaketha kokuqukethwe kudinga izinsizakusebenza, kufanele ube nokuthenga kwesikhathi eside kubaphathi bakho.
Umongo Wamasu - Uhlelo olufaka izindima, amaphuzu wezinhlungu, ama-intersest, kanye nezifiso zezithameli ezihlosiwe njengokufaka.
Ihabhu Lokuqukethwe - Izinsizakusebenza ezimaphakathi lapho izithameli zakho zingakuthola okuqukethwe okushicilelwe nokuthi zingaphakanyiswa zivela kuphi.
Abadali bokuqukethwe - Ithimba labantu abakwazi ukubhala, ukuhlela, ukubona ngeso lengqondo nokuphatha okuqukethwe.
Abaqambi kanye nochwepheshe bokuqukethwe - Abaklami bezithombe, abahleli bevidiyo, ongoti be-infographic kanye ne-ebook abathatha okuqukethwe bakuguqule kube ubuciko.
Imidiya Yezokuxhumana, Ukukhangisa, i-SEO & Marketing Authomation Ukusebenzisana - Ukwenza okuqukethwe okuhle akwanele, kufanele ube neqembu kanye ne-stratregy ukukukhuthaza.
Ukuhamba komsebenzi, Ithuluzi Lokuphathwa Kwefa Nokubambisana - Ithuluzi lokukhiqiza okuqukethwe elifana ne- Qhwa lapho ungasebenza khona maphakathi nendawo, unikeze imisebenzi, imigqa yesikhathi, nokuvunyelwa.
Ikhalenda lokuhlela - ikhono lokuhlela nokukhombisa okuqukethwe okufushane nokwesikhathi eside kohlelo lwakho lokuqukethwe.
Imihlahlandlela Yezwi Nemikhiqizo - Imihlahlandlela yokubeka uphawu nemiyalezo etholakalayo kubadali bakho nakuchwepheshe ukuqinisekisa ukuvumelana kukho konke okuqukethwe kwakho okukhiqiziwe.
Ama-Analytics - ipulatifomu yokulandelela ukusebenza kwengcezu ngayinye yokuqukethwe, umkhankaso ngamunye, iqembu ngalinye, kanye nohlelo jikelele.
The Qhwa ipulatifomu ihlangana ne-Salesforce, i-Zapier, i-Okta, i-Bitium, i-Google Apps, i-Gmail, i-Apple Mail, i-Outlook futhi inezinhlelo zayo zokusebenza ze-Android ne-iOS.
Sisebenzisa isixhumanisi sethu sokuxhumana kulokhu okuthunyelwe, qiniseka ukuthi ubhalisela futhi uthatha Qhwa i-test drive!
Tags: uhlelo lokusebenza lwe-Androidimeyili ye-apulabitiumikhalenda lokuqukethweinjini yokuqukethweukukhiqizwa kokuqukethweGmailizinhlelo zokusebenza ze-googleuhlelo lokusebenza iOSkulungileumbonosalesforceWrikezapier
Kuyini Ukukhangisa Okukhombisa Okuqondile Okuhlelekile?